Uyghur mpiaro zon’olombelona i Dilnur Reyhan, malahelo fa tsy misy firaisankina ny samy silamo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Mey 2020 17:15 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Ελληνικά, Español, Français, عربي, English
Dilnur Reyhan. Sary an'i Ikuha, nahazoana alàlana
Avy amin'ny firenena tiorka izay ataon'i Beijing lasibatra hatramin'ny niakaran'i Xi Jinping teo amin'ny fitondrana an'i Shina tamin'ny 2012 ka tsy omeny izay tena zo fototra maha-olombelona ireo Uyghurs 11 tapitrisa monina any amin'ny faritany andrefana ao Xinjiang, Shina, isan'izany ny tsy fanomezana azy ireo ny fahalalahana ara-pinoana, tsy afaka manao hetsika, ary koa ny fampitàna ny fitenindrazan-dry zareo.
Na efa betsaka aza ny antontan-drakitra momba izany, zara raha misy miraharaha ny toedraharaha manjo ireo Uyghurs, tafiditra amin'izany ireo firenena betsaka mpino miozolmàna. Mba hahatakarana ny antony, niresaka izaho sy Dilnur Reyhan, Uyghur iray nahita fianarana monina ao Frantsa ary mampianatra ao amin'ny Ivontoerana Nasiônaly ao Parisy natao ho an'ny Teny sy Sivilizasiôna Tatsinanana (INALCO). Izy ihany koa no mpanangana sady filohan'ny Ivontoerana Uyghur ao Eoropa, ONG iray mampahafantatra ireo kolontsaina sy ny olana sedrain'ny Uyghur. Mpitarika tò teny ao anatin'ny vondrom-piarahamoniny i Reyhan, izay misolovava ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny zon'ny vehivavy.
Novàna ho fohifohy kokoa ny antsafa nifanaovana.
Filip Noubel : Na misy aza ny fanitsakitsahana faobe ny zon'olombelona mitranga ao Xinjiang, mba misy kely ihany, na tsia fanehoana firaisankina avy amin'ireo governemanta any amin'ireo firenena miozolmàna. Sambany ianao nanoritra io olana io tamin'ny 2019 nandritra ny Ramadàny, tamin'ny fanaingàna ireo silamo mba hihetsika. Efa mba nisy zavatra niova ve hatramin'izay?
Dilnur Reyhan Tao anaty gazety frantsay aho no namoaka ity tsanganan-dahatsoratra ity nandritra ny Ramadàny farany teo, niaraka tamin'ny fahatsapàna hadisoam-panantenana sy hakiiviana, satria hatramin'ny faran'ny taona 2019, azo ambara ho tsy nisy mihitsy governemanta tany amin'ireo firenena miozolmàna naneho, na dia kely monja aza, firaisankina tamin'ireo Uyghurs. Ny tena nahakivy taminy dia ny tsy firaharahiana tanteraka an'ireo vahoaka any amin'ireo firenena miozolmàna, ankoatra ny ao Tiorkia. Nanakona ny mason'ireo olompirenena silamo tsotra ny fankahalàna ireo tandrefana eny anivon'ireo vahoaka silamo, ka tonga hatramin'izao fandàvana ny hino izay rehetra vaovao avy amin'ny media tandrefana izao, na ohatra aza ka ireo toby fanibohana miozolmàna no resahana. Amin'ny lafiny iray, hakàn'i Shina tombony ny maripamantarana maha-miozolmàna anay mba hanamarinany ireo toby fanibohana any aminy, amin'ny lafiny iray hafa, lavin'ny ankamaroan'ireo miozolmàna ny hino an'io sy, lalindalina kokoa, hanohana ny politika shinoa.
Tsy dia nisy zavatra niova, afa-tsy ny raharahan'i Qatar, satria ny ankamaroan'ireo firenena miozolmàna dia mainkina be amin'i Shina raha toekarena no atao resaka, ary mba hahazo tombony amin'ireo fampitàna ny haitao shinoa. Ankoatra izay, tsy manana tantara tsara tany aloha tany ny ankamaroan'ireny firenena ireny raha resaka zon'olombelona, sady zara raha miaro ny zon'ireo olona vitsy an'isa misy any amin-dry zareo. Farany, mazàna i Shina no heverina ho toy ny tsindrin'entana sahaza ho an'ny tandrefana.
Saingy hitanay ny tranga momba ireo olon-tsotra, toa an'ilay Tiorka-Alemàna mpilalao baolina kitra Mesut Özil nilaza io olana io imasom-bahoaka. Midika io fa ireo mpitari-kevitra dia afaka manaitra sy manefy bebe kokoa ny fisainan'ny daholobe.
FN: Ahoana ny momba ny fihetsik'ireo governemanta any amin'ireo firenena tandrefana? Hitanao misy fivoarana ve ry zareo momba ny olan'ny fanitsakitsahana zon'olombelona ao Xinjiang?
DR Tsaratsara kokoa ny fihetsik'ireo firenena tandrefana raha oharina amin'ny an'ireo firenena miozolmàna. Raha kely indrindra dia 22 ireo firenena tandrefana nangataka an'i Shina hanidy ireo toby fanibohany, raha 50 ireo firenena, miozolmàna ny antsasak'io, no niaraka naneho hevitra fanohanana an'i Shina. Noho ny ady ara-barotra misy amin'izao fotoana izao eo amin'i Shina sy Etazonia, hetintra ny toerana noraisin'i Washington manohitra ny politika shinoa mikendry ireo Uyghurs, indrindra fa amin'ny alàlan'ireo famaizana ataony amin'ny orinasa shinoa sy ireo manampahefana tomponandraikitra amin'ireny toby fanibohana ireny, fa koa amin'ny alàlan'ilay volavolan-dalàna ho fiarovana ny zo maha-olombelona an'ireo Uyghurs. Ao Aastralia, ahitantsika fipoirana famantarana toy izany amin'ny fiovàna politika.
Mariky ny firaisankina Taiwaney amin'ireo Uyghurs nandritra ny JUne 4th (Fahatsiarovana ilay fandripahana tao Tiananmen) iray tao Taipei. Sary an'i Filip Noubel, nahazoana alàlana.
FN: Vitanao ve ny hametraka fiarahamiasa miaraka amin'ireo mpikambana sy mpikatroka ao Shina, Hong Kong ary Taiwan?
DR : Miray hina amin'ireo hetsika ho an'ny demaokrasia ao Hong-Kong sy Taiwan ireo Uyghurs any am-pielezana. Tsy adinon'ireo vahoaka ao Hong-Kong ny nampifandray ny hetsika ataon-dry zareo amin'ny olan'ireo Uyghurs nandritra ny fihetsiketsehana nataon-dry zareo tamin'ny 2019. Iray tamin'ireo solontena avy amin'ny hetsika ho an'ny demaokrasia ao Hong Kong i Denise Ho, no sady kintan'ny seho an-tsehatra ao Azia ihany koa, izay nanohana mihitsy ny Ivontoerana Eoropeàna ho an'ny Uyghur, tamin'ny famokarana lahatsary hiantsoana ny daholobe hanohana ny fikambananay. Ao Taiwan, ilay Uyghur Örkesh [fantatra amin'ny teny shinoa hoe Wuerkaixi], mpitarika ny hetsiky ny mpianatra Tiananmen no sady mponina an-tsesitany, dia mampifandray ireo Uyghur any am-pielezana amin'ireo hetsika demaokratika ao Taiwan.
FN: Iharan'ny fampihorohoroana henjana be ny kolontsaina sy ny maripamantarana ny Uyghur ao Xinjiang. Inona avy ireo fitaovana entina manohitra mbola azon'ireo vahoaka Uyghur ampiasaina ao anatin'io toedraharaha io?
DR Hatramin'ny nametrahana io tambajotra midadasiky ny toby fanibohana ao Shina io tany amin'ny faritra Uyghur [Xinjiang] , nitombo be ny asan'ireo Uyghur any am-pielezana. Amin'ny lafiny iray, teren'ireo fikambanana politika ireo firenena tandrefana mba handray fepetra hanery an'i Shina hanidy ireny toby ireny. Amin'ny lafiny iray hafa, lasa tena iadiana fo aman'aina eny anivon'ireo am-pielezana ny fiarovana sy fitahirizana ny fiteny ary ny kolontsaina Uyghur. Araka izany, tato anatin'ny taona telo farany, saika any anivon'ireo am-pielezana rehetra any, najoro ireo sekoly mampianatra amin'ny fitenin-dreny.
Ohatra iray tsara amin'izany ny fikambananay: tamin'ny 2009, natombokay ireo hetsikay ho toy ny fikambanana mpianatra mba hampiroboroboana ny kolontsaina sy ny fiteny Uyghur tao Frantsa. Taona folo taty aoriana, niova ny toejavatra nanodidina ny faritra Uyghur, ary koa teny anivon'ireo any am-pielezana, tonga hatramin'ny fanitàrana ny hetsikay ho fitahirizana ny maripamantarana ny Uyghur any Eoropa, izay inoana fa misy Uyghurs miisa 10.000 monina.
Japana 6 ora izay